Wararka - Daabacaadda xirmada oo leh qalab baakado kala duwan
Weelasha ama xirxirashada, iyo howlaha qurxinta alaabada. Baakaduhu waa sii socoshada habka wax soo saar ee badeecooyinka habka wareejinta, waana xaalad lama huraan u ah badeecadaha inay galaan goobaha wareegga iyo isticmaalka. Doorka baakaduhu wuxuu leeyahay dhinacyada soo socda: ①Qeelashada qiimaha badeecada iyo isticmaalka isticmaalka, waana hab lagu kordhiyo qiimaha badeecada; Ka ilaali badeecada waxyaabaha dabiiciga sida qorraxda, dabaysha, roobka, iyo wasakhda wasakhda. Kahortaga khasaaraha sida daadinta, daadashada, dhalaalida, faddaraynta, isku dhaca, isku uruursiga, luminta, iyo xatooyada; ③ Keeno sahlanaato keydinta, gaadiidka, hagaajinta iyo iibinta wareegga, sida rarida iyo dejinta, tirinta, taranka, dhoofinta, iyo qaadashada, Transshipment, tirinta iibka, iwm; Ify qurxinta alaabada, soo jiidata macaamiisha, iyo dhiirrigelinta iibka.
Baakadaha waxaa loola jeedaa waxqabadyo taxane ah si loo qaabeeyo loona soo saaro weelal ama duub. Baakadaha, oo ah warshad adeeg oo taageerta dhaqaalaha qaranka, ayaa sii waday koboca iyo horumarinta iyadoo ay weheliso dhismaha hantiwadaagga Shiinaha. Gaar ahaan tan iyo dib-u-habeyntii iyo furitaankii, ee nidaamka dhaqaalaha suuqa hantiwadaagga, warshadaha baakadaha ayaa si dhakhso leh u horumarsan. , Daabacaadda, mashiinadu waa qaybaha ugu muhiimsan, oo leh teknolojiyad iyo qalab casri ah qaarkood, iyo nidaam warshadeed casri ah oo leh qaybo kala duwan oo dhammaystiran. Warshadaha baakadaha ee Shiinaha ayaa soo qaatay in ka badan 20 sano, iyagoo dhameystirayay horumarka dalalka horumaray 40-kii sano ee la soo dhaafay, iyo asal ahaan wax ka beddelaya xaaladda "alaabada heerka koowaad, baakadaha heerka labaad, iyo qiimaha heerka saddexaad". Warshadaha baakadaha ayaa ka soo gudbay warshad kala firidhsan oo dib udhac ah waxayna u gudubtay nidaam warshadeed dhameystiran oo leh qalab farsamo oo casri ah iyo kala sooc dhameystiran. Astaamaha muuqda ee horumarka warshadaha baakadaha maanta waa caalamiyeynta suuqa baakadaha, caalamiyeynta horumarka warshadaha baakadaha, iyo sii kordheysa xiriirka iyo ku tiirsanaanta horumarinta warshadaha baakadaha ee dalal kala duwan.
Ku lugaynta suuqa, ku dhowaad qof walbaa wuu fahmayaa waxa ay baakadu tahay. Si kastaba ha noqotee, mar uun ku hawlan naqshadeynta baakadaha, waa lama huraan in badiyaa badeecooyinka badeecooyinka, noocyada baakadaha kala geddisan, iyo degdegga "talo-bixinta" aysan xakamayn karin khadka ugu muhiimsan. In kasta oo dalal kala duwan ay dejiyeen qodobo kooban oo cad oo qeexaya qeexitaanka baakadaha, sida Mareykanka: Baakadaha waa ficil loogu diyaargaroobayo rarka iyo iibinta alaabada. Boqortooyada Midowday Boqortooyada Midowday: Baakadaha waa diyaarin farshaxan, cilmiyeed iyo farsamo loogu talagalay gaadiidka iyo iibinta alaabada. Kanada waxay aaminsan tahay in baakaduhu ay yihiin aalad loogu talagalay in alaabada looga keeno alaab-qeybiyeyaasha macaamiisha ama macaamiisha iyadoo alaabooyinka lagu hayo xaalad wanaagsan. dalkaygu wuxuu muddo dheer ku qeexay baakadaha inay tahay erey guud oo loogu talagalay alaabooyinka ilaaliya wax soo saarka inta lagu jiro wareegga, fududeynta kaydinta iyo gaadiidka, iyo dhiirrigelinta iibka.